रबि लामिछानेको पक्षमा देशभरी आन्दोलनको घोषणा,१ लाख सेयर पुरियाउ – PanchKhal Online
Home/समाचार/रबि लामिछानेको पक्षमा देशभरी आन्दोलनको घोषणा,१ लाख सेयर पुरियाउ
रबि लामिछानेको पक्षमा देशभरी आन्दोलनको घोषणा,१ लाख सेयर पुरियाउ
काठमाडौँ । प्रहरीले टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीन जनालाई आज पक्राउ गरेको छ । नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ पर्नेमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता लामिछानेसहित युवराज कँडेल र ओखलढुङ्गाकी अस्मिता कार्की छन् ।
बिहीबार मात्रै सार्वजनिक भएको उक्त भिडियोका आधारमा अनुसन्धानका लागि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । भिडियो प्रहरीले डिजिटल परीक्षणसमेत गरिसकेको छ । पुडासैनी साउन २० गते चितवनको नारायणगढस्थित होटल कङ्गारुको कोठाभित्र मृत भेटिएका थिए । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि रमेश प्रसाईले रबि लामिछाने पक्राउ परेपछि आक्रोशित हुँदै सारा नेपालीलाइ भने अब के गर्ने ?
यो हामी सबैको परिक्षा हो अब रवि लामिछानेप्रति षड्यन्त्र भइरहेको छ । उहाँको न्यायका लागि भोली चितवन जिल्ला अदालत जाऊँ भन्दै अपिल गरेका छन् । साथै फेसबकुमा धेरैले लेखेका छन् । आन्दोलनका लागि तयार हौँ । पोखराका अशोक ओझा त ११ बजे पोखरा चिप्लेढुंगामा भेला हुन सबैलाई अपिल गर्दछन् ।
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला कार्यक्षमतामा ह्रास, सिंगापुरमा उपचार गरेर पनि सुधार भएन
रवि लामिछानेको उपस्थितिमा रास्कोट सामूदायिक अस्पतालका लागि मेलबर्नमा १८ हजार डलर सहयोग संकलन !
विप्लवका छोरालाई सिधा प्रश्नः यति महंगो मोटरबाईक चढ्नुहुन्छ, आम्दानी स्रोत के ? (बिशेष अन्तरवार्ता)